10 ADEEGYADA KAYDINKA ONLINEKA AH EE BILAASHKA AH EE ugu Wanaagsan 2021 Goobta Hantida
Bogga ugu weyn 10 ADEEGYADA KAYDKA BILAASHKA EE KALIYA EE BILAASH AH / ADEEGYADA DARYEELKA QAABKA EE 2021
Bal qiyaas inay kugu adag tahay inaad ku kaydiso taxane xog muhiim ah oo waxtar leh iyo faylal ku jira aaladdaada wax lagu kaydiyo: flash drive ama drive adag, ama ka dib keydinta faylashaada, lama geli karo adeegsiga ama dib u helidda. Adeegyada Kaydinta Online -ka ayaa u yimid inay tirtirto xusuustaas xanuunka badan ee lumisay dukumenti muhiim ah.
Niyadjabka aad dareemi lahayd haddii aad lumiso xog muhiim ah iyo cadhada ah in aadan kaydin faylasha markii aad u baahnayd.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo leh hal-abuurnimada teknolojiyadda shakhsiyaadka iyo ganacsiyadu waxay ku kaydin karaan faylashooda kaydinta adeegyada daruuraha si ay dalab ugu helaan marin kasta oo ka mid ah qalabkooda. Macnaha, xogta iyo faylasha lagu kaydiyey kaydinta daruuraha ayaa laga heli karaa aaladaha oo dhan.
Kaydinta daruurtu waa qaab xisaabeed daruur ah oo kaydiya xogta internetka iyada oo loo marayo bixiyaha xisaabinta daruuraha oo maamula oo u shaqeeya kaydinta xogta adeeg ahaan. Waxa kale oo la odhan karaa “kaydinta la martigeliyey,” “kaydinta internetka” ama “kaydinta daruuraha”. Xogta waxaa lagu bixin karaa dalabka iyada oo leh awood waqtigeedii la joogo iyo kharashyo waxayna meesha ka saareysaa iibsashada iyo maareynta nidaamka keydinta xogtaada taas oo keenta “mar kasta, meel kasta” helitaanka xogta.
Sidaa darteed, haddii aad ka fikiraysay hab lagu kaydiyo xogta iyo faylasha oo meel kasta iyo waqti kasta laga heli karo bilaash, maqaalkan adiga ayaa laguu sameeyay. Si taxaddar leh u akhri oo dooro mid kasta oo ka mid ah bixiyeyaasha adeegga kaydinta daruuriga ah ee aad jeceshahay. Aan ku quusno.
Adeegga kaydinta daruurtu waa ganacsi ama adeeg ilaaliya oo maamula xogta macaamiisheeda kana dhiga xogtaas mid laga heli karo shabakad, badiyaa intarneedka. Bixiyeyaasha kaydinta daruuraha ayaa sidoo kale bixiya koritaan aan xad lahayn iyo awoodda lagu kordhinayo loona yareeyo awoodda kaydinta ee baahida.
Sanadihii la soo dhaafay, tirada iibiyeyaasha bixiya kaydinta xogta internetka ee macaamiisha iyo ganacsatadaba aad bay u kordheen. Adeegyada qaarkood waxay keydiyaan oo keliya nooc xog gaar ah, sida sawirro, muusig ama xog -kayd, halka kuwo kalena ay u oggolaan doonaan dadka isticmaala inay kaydiyaan nooc kasta oo fayl ah.
Si kastaba ha ahaatee, iibiyayaashan badankood waxay bixiyaan qadar yar oo kayd ah oo lacag la'aan ah oo leh awood kaydin oo dheeraad ah oo lacag lagu heli karo, sida caadiga ah waxaa la bixiyaa bil walba ama sannadle.
Waa maxay sababta Adeegyada Kaydinta Onlineka ah?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka kaydinta daruurtu waa kartida helitaanka xogta meel kasta. Maaddaama tirada aaladaha qofka caadiga ahi isticmaalo uu sii kordhayo, isku -duwidda ama wareejinta xogta ka dhex jirta aaladaha ayaa noqotay mid aad muhiim u ah. Kaliya maahan inay ka caawiso wareejinta xogta u dhexeeya aaladaha, kaydinta xogta khadka tooska ah waxay sidoo kale bixisaa awood ay ku wadaagaan faylasha dadka isticmaala kala duwan.
Asal ahaan, tani waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay dadka isticmaala meheradda; in kasta oo ay sidoo kale caan ku tahay macaamiisha doonaya inay la wadaagaan sawirrada, fiidyowyada iyo agabka la midka ah saaxiibadood iyo qoyskooda.
Kaydinta daruuraha, ma jirto qalab la iibsado, kaydinta siinta, ama raasumaalka loo adeegsado xaaladaha “maalin”. Waxaad ku dari kartaa ama ka saari kartaa awoodda dalabka. Kaydinta daruuraha ayaa u oggolaanaysa IT inay si dhakhso leh u gaarsiiso xaddiga saxda ah ee kaydinta loo baahan yahay, isla marka loo baahdo. Tani waxay u oggolaaneysaa IT inay xoogga saarto xallinta dhibaatooyinka codsiga ee adag halkii ay lahaan lahayd maaraynta nidaamyada kaydinta.
Kaydinta daruuraha ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa kaydinta caddaynta musiibada dabiiciga ah maxaa yeelay waxay ku taal meel ka baxsan, sida caadiga ah waxaa jira 2 ama 3 adeegyo gurmad oo kala duwan oo ku yaal meelo kala duwan oo adduunka ah. Dab, daad, dhulgariir ama xaalad la mid ah, kaydsiga goobta ayaa waxyeello u geysan kara, laakiin kaydinta onlaynka ah ma saamayn doonto.
Sidee Kaydinta Cloud u Shaqaysaa?
Kaydinta daruuraha waxaa laga soo iibiyaa iibiye daruur saddexaad oo leh oo ka shaqeeya awoodda kaydinta xogta wuxuuna ku gudbiyaa internetka qaab lacag-bixineed ah. Iibiyeyaashan kaydinta daruurtu waxay maamulaan awoodda, amniga iyo cimri dhererka si xogta looga dhigo mid la heli karo codsiyadaada adduunka oo dhan.
Sidaa darteed, codsiyadu waxay marin u helaan kaydinta daruuraha iyada oo loo marayo borotokoollada kaydinta dhaqanka ama si toos ah iyada oo loo marayo API. Iibiyeyaal badan ayaa bixiya adeegyo dhammaystiran oo loogu talagalay inay gacan ka geystaan ​​ururinta, maareynta, sugidda iyo falanqaynta xogta si baaxad leh.
Immisa ayuu ku kacayaa Adeegga Kaydinta Daruuraha?
Kharashka kaydinta daruurtu wuxuu ku salaysan yahay kaydinta xogta, isticmaalka shabakadda, adeegsiga hawlgalka iyo dib u helidda iyo khidmadaha xaalufinta hore.
Iyada oo ku xidhan bixiyaha, xalka kaydinta daruurtu wuxuu ku kici karaa meel kasta $ 5-25 halkii isticmaale bishiiba ama sicir siman oo ah $ 2-50 bishii. Qiimuhu aad buu u kala duwanaan karaa dhowr sababood awgood.
Haddii aad raadineyso qorshe ganacsi ku saleysan oo ka dhan ah mid ku wajahan shaqsiyaadka, markaa qiimaha ayaa si otomaatig ah u kordhaya. Tani waa sababta oo ah shaqsi raadinaya inuu ilaaliyo qaar ka mid ah sawirrada shaqsiyeed iyo dukumiintiyadu waxay qaadanayaan meel aad uga yar daruuraha marka loo eego meherad, oo leh faylal aad u tiro badan si loo sugo.
Iyada oo ku saleysan xaddiga isticmaaleyaasha ku jira qorshaha, bixiyaha kaydinta daruuraha ayaa kordhin doona qiimaha. Tani waa sababta oo ah isticmaaleyaal badan ayaa kordhiya xaddiga xogta ay tahay in bixiyaha kaydinta ay ilaaliso, taas oo culays badan saarta server -kooda.
Kharashka kaydinta daruuraha ayaa sidoo kale kordhaya iyada oo ku saleysan wadarta xogta la kaydiyey. Tusaale ahaan, waxaa jiri kara hal qorshe oo ku wajahan ilaa 10 isticmaale oo xad u leh tirada guud ee xogta la kaydin karo iyo sidoo kale cabbirka faylka ugu badan ee lagu ridi karo daruuraha.
Markaad fiirineyso qiimeynta xalka kaydinta daruuriga, bixiyeyaal badan ayaa bixiya qiime ku saleysan isticmaale kasta, tusaale ahaan $ 5 halkii isticmaale bishii. Iyada oo ku xidhan inta isticmaale ee ku jirta shirkaddaada, tan ayaa si dhakhso leh isugu dari karta.
Bixiyeyaasha kale ayaa laga yaabaa inay bixiyaan qiime bille ah oo siman. Markaad cilmi baaris ku sameyneyso qiimeynta, soo ogow haddii aad doorbidi lahayd qiimo bille ah oo guri ah ama qiimaha isticmaale kasta ee xalka kaydinta daruurahaaga.
Waxaad kaloo aqrisan kartaa: 15ka Dariiqo Ee Ugu Sareeya Dadka Danyarta Ah Waxay Isku Dayaan Inay U Muuqdaan Qani
10 Adeegga Kaydinta Bilaashka ah ee ugu Fiican ee Bilaashka ah ama Adeegga Kaydka ee 2021
Waxaa jira adeegyo kaydinta onlaynka ah oo kala duwan oo bixiya kaydinta bilaashka ah oo waliba la bixiyo haddii aad rabto astaamo badan.
Google drive waa adeeg kaydinta xogta oo bilaash ah oo ay bixiso Google. Adeeggu wuxuu isku waafajiyaa feylasha la keydiyey, sawirrada, iyo in ka badan dhammaan kombiyuutarada isticmaalaha, kiniiniyada, iyo aaladaha gacanta. Waxay bixisaa 15 GB oo boos bilaash ah.
Waxaad dhisi kartaa Docs, Sheets, Slides
Waxay bixisaa iswaafajinta waqtiga-dhabta ah
Waxaad abuuri kartaa foomam kaa caawiya inaad socodsiiso sahan
Qalabka waxaa loo adeegsan karaa macOS
Waxay ku dhex milmi kartaa barnaamijyo badan oo dibedda ah
Waxay kaa caawineysaa inaad keydiso dukumiintiyada ilaa 1.02 milyan oo xaraf, xaashiyo ka badan hal milyan oo unug, iwm.
Dropbox waa adeegga martigelinta faylka oo bixiya daruur shaqsiyeed, isku -duubnaan fayl, kaydinta daruuraha, iyo softiweerka macmiilka. Waxaa loogu talagalay inay iska kaashadaan mashaariicdaada haddii aad kaligaa shaqaynayso ama koox ahaan.
Waxay ku siineysaa inaad si nabadgelyo leh u waafajiso xogta dhammaan aaladaha
Cabbirka faylkaagu waa inuu ahaadaa 50 GB ama ka yar
Adeeggu wuxuu diyaar u yahay macOS, Linux, iyo nidaamyada hawlgalka Windows.
#3. Amazon Drive
Amazon drive ama Amazon Cloud Drive waa codsi kaydinta daruuraha ee Amazon. Adeeggu wuxuu bixiyaa kaydinta daruur sugan, wadaagista faylka, daabacaadda sawirrada, iyo kaydinta faylka.
Waxay kaa caawineysaa inaad abaabusho oo tafatirto sawirrada onlaynka ah
Waxay si otomaatig ah u taageertaa sawirrada iyo fiidyowyada taleefankaaga
Wuxuu isku waafajiyaa faylashaada iyo faylkaaga
Microsoft OneDrive waa adeeg ku-kaydinta iyo adeeg-siinta isku-xidhka onlaynka ah. Waxaa bilaash loogu heli karaa dhammaan dadka haysta koontada Microsoft. Barnaamijyada OneDrive waxaa loo isticmaali karaa in lagu waafajiyo faylasha Windows PC ama nidaamka hawlgalka Mac.
Wuxuu baaraa kaararka ganacsiga, rasiidhada, qoraalada sabuuradda ee OneDrive
Wuxuu dejiyaa taariikhda dhicitaanka ee faylasha la wadaago ujeedooyin amni
Waxay kor u qaadaysaa faylka illaa 15GB oo cabbir ah
Mega waa adeeg kaydinta iyo kaydinta faylka oo ay bixiso Mega Limited. Adeeggan kaydinta onlaynka ah ayaa diyaar u ah daaqadaha Windows, Mac, iyo Linux.
Waxay bixisaa 50 GB meel lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah
Wuxuu adeegsadaa furayaasha sirta faylasha iyo sheekaysiga
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku dhejiso faylasha iyo faylalka
Uploads/downloads 1GB data 6 saac kasta
la xiriira: Dib -u -eegista Blippi 2021: Lacag intee leeg ayay Blippi ka samaysaa YouTube -ka?
pCloud waa mid sugan oo fudud in loo isticmaalo kaydinta daruuraha onlaynka ah ee dukumentiyadaada. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la wadaagto oo aad iskaashi la yeelato faylasha shaqaalahaaga, saaxiibbadaada, iyo qaraabadaada.
Waxay kaa caawineysaa inaad si qarsoodi ah u ilaaliso faylashaada khaaska ah oo leh heerka ugu sarreeya ee sirta
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku keydiso xusuustaada qiimaha leh pCloud adoo gujinaya guji badhanka
Waxay kaa caawineysaa inaad shaandhayso faylashaada iyadoo loo eegayo qaabka faylka
ku kaydiya faylasha faylashaada muddo cayiman, taas oo kaa caawinaysa inaad raadiso faylasha kaydka
IDrive waxay bixisaa adeeg kaydinta xogta. Adeeggan waxaa diyaar u ah Windows, Linux, iOS, Android, iyo dadka isticmaala Mac.
Waxay bixisaa 5 GB oo lacag la'aan ah
Abaabula oo kormeera kaydinta PC -ga shabakadda internetka
Soo rar ama soo dejiso faylasha illaa 2 GB oo cabbir ah
Waxay bixisaa xalka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo dhammaan kombiyuutarrada, Mac -yada, iPhones, iyo aaladaha Android hal koonto
Adeeggan daruuriga ah wuxuu ka dhigayaa wadaagista faylasha kombiyuutar kasta ama aaladda moobiilka sida ugu fudud. Waxay bixisaa xalka ugu habboon kaydinta iyo wadaagga xogta qarsoodiga ah iyo kuwa xasaasiga ah.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad u dirto faylasha cabbir kasta qof kasta
Waxay taageertaa Windows, Mac, iOS, iyo Android
Wuxuu siiyaa wareejin xog aan xad lahayn dhammaan qorshayaasha
Icedrive waa adeegga kaydinta daruur ee jiilka xiga oo kaa caawinaya inaad gasho, maamusho, oo aad cusboonaysiiso kaydinta daruurahaaga si dhibyar. Waxay bixisaa meel lagu wadaago, lagu soo bandhigo, oo lala kaashado faylashaada.
Waxay taageertaa Qarsoodi Laba Kalluun; wax walba waa lagu qarsoon yahay dhinaca macmiilka iyada oo aan lahayn aqoonta xogtaada
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku kaydiso faylasha illaa 10 GB lacag la'aan
Waxay bixisaa interface nadiif ah oo sahlan in la isticmaalo si loo maareeyo faylashaada
Waxay ka durdurisaa warbaahinta kaydinta daruuraha oo si fudud ula wadaag asxaabta
#10. Wadista shaqada
Workdrive waa nidaam kaydinta daruuraha oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u maamusho faylasha. Waxay kuu saamaxaysaa inaad abuurto, iskaashi samayso, oo aad samayso wada -shaqayn kooxeed dadaal yar. Madalkani wuxuu adeegsadaa SOC 2 (Xakamaynta Ururka Adeegga) Nooca II.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka fikirto kooxda waqtiga-dhabta ah
Waxay bixisaa warbixino la beddeli karo
Laga heli karo taleefannadaada casriga ah iyo kiniiniyada
si fudud u kaydi oo u maaree faylasha
Marka la soo koobo, waxaad heli kartaa faylashaada; xogta, dukumiintiyada, fiidyowyada, sawirrada la kaydiyey niyad -jab la'aan iyo cabsi laga qabo inay waayaan. Waxaad si fudud ugu heli kartaa faylashaada meel kasta iyo waqti kasta adiga oo adeegsanaya aaladdaada.
Adeegga kaydinta daruuraha ayaa yimid si uu u joogo. Sidaa darteed, hubi oo dooro mid kasta oo ka mid ah adeegyada kaydinta daruuraha ee kor ku taxan oo naftaada ka badbaadi walaaca raadinta faylasha lumay iyo hababka suurtagalka ah ee dib loogu soo ceshan karo.
10 Barnaamijyada Scanner HD ee ugu Fiican ee Dukumentiyada
15 Software -ka Tafatirka Fiidiyowga Bilaashka ah ee ugu Fiican Android, PC -yada, macruufka iyo Mac
Sida Lacag Bilaash ah Loogu Helo Mercari: Hesho Dhibco Bilaash ah Maalin kasta
UberEats vs Saaxiibo | Midkee Ku Fiican 2022? Sharci ama Fadeexad
Haddii aad rabto inaad cunto gaarsiiso laakiin aadan ogeyn midka u dhexeeya xulashooyinkaan wanaagsan - Uber Eats…
Dib -u -eegista Textbroker 2022: Qaanuunka Sharciga ah ama Qoraalka Tooska ah ee Qoraalka?
Madal ahaan, textbroker-ku waxa uu xoojiyaa qorayaasha iyo ganacsiyada labadaba. Dib u eegista qoraalka Broker-ka ee 2022 ayaa ku tusinaysa sida ay u shaqeyso, haddii ay tahay…
Dib u eegida Kaarka Amex 2021 | Wali Ma U Qalantaa?
Marka ay timaado kaararka premium, isticmaalayaashu maalmahan waxay haystaan ​​fursado badan. Inkasta oo qaar badan oo ka mid ah lacagtan…